Anyị vs.!! You na-ege ntị? | Martech Zone
Wenezde, August 13, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe m gụsịrị ihe dị ntakịrị Nweta Na, Otu n'ime ajụjụ ndị otu a jụrụ masịrị m nke ukwuu Pragmat ahịa. Ndi ebe nrụọrụ weebụ gi na-ekwu okwu banyere ulo oru gi ka obu na ekwu banyere ndi ahia gi?
Agbanyeghị na ọ dị mkpa igosipụta ikike gị na oghere gị, ọ dị mkpa karịa ka ị gwa ihe ị rụpụtara maka ndị ahịa gị. Ajụrụ m ajụjụ ahụ Twitter na o nwetara ụfọdụ ntị site nnọọ ole na ole folks, gụnyere Andy Beal of Onye njem ala ahia.
Ekpebiri m itinye onwe m n'ule ahụ… a na m ekwu maka onwe m karịa na blọọgụ m karịa gbasara ndị na - agụ ya? Edere m Nyocha na Calculator iji chọpụta! Ihe mgbako parses gị na ndepụta ma tụọ olu nke M, m, anyị, ị, ị, anyị, anyị wdg. na ọdịnaya nke ndepụta. Ọ dịkwa utu aha ka ukwuu!
Ndị a bụ nsonaazụ maka blọgụ m, 9 n'ime 10:
Nke a pụtara na m na-ekwu maka ya ị oge ka ukwuu! N'ụzọ na-akpali mmasị, etinye m adreesị nri nke ụfọdụ ndị isi A-listers na nsonaazụ ha niile n'ọtụtụ! Nye ya ogbugba! Ọ bụrụ n ’ị chọtara ndị narcissist (akara 0), gwa m! Enwere m obi ụtọ na aha nke nsonaazụ.
Gbalia iburu otu Na-ege ntị: Kpughere ohere ndị pụrụ iche na-eduga na nchụso azụmaahịa. Ọ bụ akwụkwọ pụtara ìhè n’ịkparịta ụka nke ọma na ndị ahịa yana atụmanya iji bulie azụmaahịa gị. Akụkụ ọkacha mmasị m nke akwụkwọ ahụ bụ na ngalaba ọ bụla na-enye ihe atụ ụwa nke ụlọ ọrụ Tuned In!
Tags: onye isi ahiaahiaụlọ ọrụ na-ere ahịaonye isi ahiapinfluencerpinterest zooPragmat ahịatestflight ndụWordPress
Emeghị m nke ọma. 60% banyere onwe m. Mana echeghị m na m ghọtara nke a. Ọ bụ m blog. Anaghị m achọ ikwu maka ndị ahịa m. Ana m agbalị ịgwa ha * nke ga - eme ka m jiri okwu dịka “M” na “mụ”. Ọ bụrụ na m ga-ọkpọ ọkpọ otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ m fọdụrụnụ, ihe "m" nwere ike ịdaba na 10% ma ọ bụ obere.
Ekwenyere m, Patric. Ọ bụ naanị obere nlele iji chọpụta ma ị na-ekwukarị banyere onwe gị. Ọbụlagodi mgbe anyị na-ekwu maka onwe anyị, echere m na ọ dị mkpa itinye ya n'ọnọdụ ndị na-ege ntị. M na-ekwu banyere onwe m ọtụtụ na blọọgụ, mana m na-anwa ịkọrọ ha ihe kpatara ya ji dị ha mkpa!
Ngwaọrụ dị jụụ! Enwetara m otu ihe ahụ dị ka Patric. Dịka ntuziaka, ọ na-enye aka, ọ bụ ezie na ekwenyere m na enwere ọtụtụ mgbanwe na-emetụta mkpa otu akara. Yourtụle blọọgụ gị na oge, na-agbaso otu omume, nwere ike ịba uru karịa ịlele nọmba akọwapụtara.
Na Pilgrim Ahịa, anyị na-ekwu maka "gị" 60% nke oge. Obi dị m ụtọ na nke ahụ, n'ihi na folks na-agụ blog iji ebe a “anyị” uche na ahịa ozi ọma na otú ọ mmetụta “ha.” Yabụ na ọ bụ ezi nguzozi.
Ugbu a, mgbe ị na-ere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ n'ezie, 90% kwesịrị ịbụ ihe mgbaru ọsọ ịchọrọ.
Ngwá ọrụ dị mma Doug!
Ekwenyere m, Andy. Echere m na otu ihe dị mkpa nke blog B to ikwu banyere onwe gị ka ndị ọbịa wee nwee ike iwulite mmekọrịta gị na gị yana ọkachamara.
Obi dị m ụtọ na akwụkwọ a tọrọ gị ụtọ. Nke a bụ ihe dị egwu nke mbụ ị na-enyocha ebe ị nọ na Tuned In spectrum. Daalụ maka ịkekọrịta ya. Anyị na-achọkwa ụzọ ndị yiri ya iji chọpụta etu anyị si amata ahịa, na-eke ngwaahịa ndị na-edozi ezigbo nsogbu ahịa ma na-ebute ụzọ ga-adabara ndị na-azụ ahịa. Ana m atụ anya ịkọrọ ha gị na obodo gị.
Daalụ nke ukwuu maka ịkwụsị! Enwere m obi ụtọ na akwụkwọ ahụ ma nwee ekele maka nghọta nke otu gị - ọ dị ka ndị gị n'ezie were akụnụba gị na ihe ọmụma na afọ nke ahụmahụ wee tinye ya niile n'okpuru otu mkpuchi. Nnukwu ọrụ!
Aug 14, 2008 na 2:46 PM
Daalụ maka ngwá ọrụ Doug. Enwetara m 50-50. Maka saịtị ntanetị nke ga - abụ ezigbo nguzozi dị ka Andy kwuru.
Maka ọtụtụ saịtị ecommerce, anyị ga-echebara ha echiche karịa naanị broshuọ dị n'ịntanetị na ụlọ ọrụ ahụ. N'ezie okwu gị "ma ọ bụ" gị "nke pụtara na saịtị (ozi ziri ezi ma ọ bụ mgbasa ozi ọ bụla) nke na-enye ngwaahịa / ọrụ ga-abụ ahịa ahịa ka mma karịa nke nwere" M 'na "m" ya. Ndị a bụ echiche ndị bụ isi n'azụ idepụta ederede dị ukwuu.
Ezi akwukwo edeputara maka ndi mmadu ka ha malite site na ya bu akwukwo a ma ama nke Claude Hopkins, Mgbasa Ozi Sayensị. Nke a bụ GTKWUO (ọ bụrụ na ịmebeghị ya ugbu a) na ọtụtụ ndị nwere azụmaahịa na-aga nke ọma ejirila ya gbanwee ahịa azụmaahịa ha iji bulie ahịa. Ọbụna nye ndị gụrụ ya, ọ bara uru ịgụ ya ugboro ole na ole.
Aug 14, 2008 na 5:10 PM
Kedu ngwá ọrụ dị egwu. Daalụ maka imepụta ya. Obi dị m ụtọ ikwu na blọọgụ m gbanwere 9. (Nnukwu ude nke nnwere onwe - chee ma ọ bụrụ na otu n'ime ụmụ nwoke ndị dere akwụkwọ ahụ bụ akara nzuzu…) Lezie anya, David
Aug 15, 2008 na 7:17 PM
Isi ihe m: 85 Isi ihe ndị ọzọ: 91
Tụlee (5 n'ime 10)
Hmmm… Amata m ka nwere ọrụ m ga-arụ na nke m.
Kpọmkwem ngwá ọrụ ezie ekele
Mmasị… Naanị awa 48, blọọgụ m esi na 9 gaa na 8. M ga-achọpụta ihe kpatara ya !! Devid
Aug 18, 2008 na 6:34 PM
Douglas, Daalụ maka ịkekọrịta Tuned Na Calculator. Enwere m nnukwu mmasị na akwụkwọ a na-akụzi na m niile maka ngwaọrụ ndị na-enyere anyị aka ịmatakwu obere ọbịbịa anyị.
Enwere m mmasị ịmatakwu banyere otu ị si abịa na akara ahụ. Odela ozi banyere metrik ị jiri gbakọọ akara? Aga m eji onye na-ahu maka ihe mmaka m mma. Mara otu ị ga - esi nweta akara ga - enyere aka karịa. Michael
Nov 18, 2008 na 5:25 PM
Daalụ Douglas nnukwu ngwa ọrụ na post - o doro anya na m gbatara 10/10
(M Points: 1 Ihe Ndị Ọzọ: 80) Ana m eche na m kwesịrị ilekwasị anya karị na m…
Eleghị anya ị ga - enwe ohere ịkwụsị site na blọgụ m oge ụfọdụ - http://www.kasumiseo.co.uk/ - M Blog banyere SEO na Online Marketing (n'ezie na ga-enye m amara mgbe !!!)
Site na mmasi ihe ị chere bụ ezigbo nsonaazụ maka onye nyocha gị?